Amakhukhi - Kerry Blue Terrier Foundation
Lapho sibeka amakhukhi
Ukuhlaziya kanye nokusebenza
Izikhangiso ezivela emaqenjini wesithathu
Ithuluzi Lethu Langaphakathi
Inqubomgomo yethu Yobumfihlo ichaza imigomo yethu maqondana nokuqoqwa, ukucubungula kanye nokugcina imininingwane yakho. Le nqubomgomo ichaza ngokuqondile ukuthi thina, abalingani bethu, nabasebenzisi bezinsizakalo zethu sisebenzela kanjani amakhukhi, kanye nezinketho okufanele uzibambe.
Amakhukhi izingcezu ezincane zedatha, egcinwe kumafayili wombhalo, agcinwa kwikhompyuter yakho noma kwenye idivaysi lapho amawebhusayithi alayishwa esipheqululini. Zisetshenziselwa kakhulu ukukhumbula wena nezintandokazi zakho, kungaba ukuvakasha okukodwa (ngokusebenzisa "ikhukhi leseshini") noma ukuvakasha okuphindwayo okuningi (kusetshenziswa "ikhukhi eliphikelelayo"). Baqinisekisa isipiliyoni esingaguquguquki nesisebenzayo sabavakashi, futhi benza imisebenzi ebalulekile njengokuvumela abasebenzisi ukuthi babhalise futhi bahlale bangene ngemvume. Amakhukhi angasethwa isayithi olivakashelayo (elaziwa ngokuthi "amakhukhi weqembu lokuqala"), noma ngabantu besithathu , njengalabo abasebenzela okuqukethwe noma abanikezela ngezinsizakalo zokukhangisa noma zokuhlaziya kuwebhusayithi ("amakhukhi wesithathu").
Womabili amawebhusayithi kanye nama-imeyili e-HTML nawo angaqukatha obunye ubuchwepheshe bokulandela umkhondo obunjenge- “web beacons” noma “amaphikseli.” Lezi yizithombe ezivulelekile ngokusobala ezisinikeza izibalo, ngezinhloso ezifanayo njengamakhukhi. Zisetshenziswa kaningi ngokuhlangana namakhukhi, noma zingagcinwanga ekhompyuter yakho ngendlela efanayo. Ngenxa yalokhu, uma ukhubaza amakhukhi, ama-beacons e-web angalayisha, kepha ukusebenza kwawo kuzokhawulelwa.
Sisebenzisa amakhukhi ngezinhloso eziningi ezahlukahlukene. Amanye amakhukhi adingekayo ngenxa yezizathu zezobuchwepheshe; ezinye zinika amandla okwenzeka komuntu okuthandwa nguwe izivakashi nabasebenzisi ababhalisiwe; futhi abanye bavumela ukukhonjiswa kokukhangisa kusuka kumanethiwekhi avela eceleni akhethiwe. Amanye ala makhukhi angahle ukusethwa lapho ikhasi lilayishwa, noma lapho isivakashi sithatha isenzo esithile (ngokuchofoza inkinobho ethi "like" noma "landela" eposini, ngokwesibonelo).
Amakhukhi amaningi esiwasebenzisayo asethwa kuphela uma ungumsebenzisi obhalisiwe (ngakho-ke akudingeki ungene ngaso sonke isikhathi, ngokwesibonelo), kanti amanye asethwa njalo lapho uvakashela elinye lamawebhusayithi ethu, kungakhathalekile ukuthi unawo i-akhawunti
Ukuthola imininingwane eminingi ngezinqumo onazo mayelana namakhukhi esiwasebenzisayo, sicela ubheke isigaba Esilawula Amakhukhi ngezansi.
Sisetha amakhukhi ezindaweni eziningi ezahlukahlukene kuzinsizakalo zethu zonke. Lokhu kufaka phakathi:
Kumawebhusayithi ethu (kufaka phakathi i-automattic.com, kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info,
Kumadeshibhodi wokuphatha amawebhusayithi ethu, njenge-wp-admin.
Kumasayithi esisebenzisela abasebenzisi bethu.
Kumasayithi afaka ama-plugins wesithathu
Ithebula elingezansi lichaza izinhlobo zamakhukhi esizisebenzisayo kumawebhusayithi ethu nokuthi kungani sizisebenzisa.
Isigaba samakhukhi Kungani sisebenzisa la makhukhi
Kuyadingeka Kakhulu Lawo makhukhi abalulekile kumawebhusayithi ezinsizakalweni zethu ukwenza imisebenzi yawo eyisisekelo. Lokhu kufaka phakathi okudingekayo ukuze kuvunyelwe abasebenzisi ababhalisiwe ukuthi baqinisekise futhi benze imisebenzi ehlobene ne-akhawunti, futhi basindise okuqukethwe "okalotari" abonakalayo kumasayithi anokusebenza kwe-ecommerce.
Ukusebenza Lawo makhukhi asetshenziselwa ukugcina okuncamelayo okusethwe ngabasebenzisi njengegama le-akhawunti, ulimi nendawo.
Security Sisebenzisa la makhukhi ukusiza ekuboneni nasekuvikeleni izingozi zokuphepha.
Ukuhlaziya kanye nokusebenza Amakhukhi wokwenza umsebenzi aqoqa imininingwane yokuthi abasebenzisi basebenzisana kanjani namawebhusayithi ethu, kufaka phakathi amakhasi avakashelwa kakhulu, kanye neminye imininingwane yokuhlaziya. Sisebenzisa le mininingwane ukwenza ngcono ukuthi amawebhusayithi ethu asebenza kanjani futhi siqonde ukuthi abasebenzisi basebenzisana kanjani nabo.
Ukukhangisa Lawo makhukhi asetshenziselwa ukubonisa ukukhangisa okufanele kubavakashi abasebenzisa izinsizakalo zethu noma vakashela amawebhusayithi esiwaphethe noma esiwanikezayo, futhi baqonde futhi babike ngokusebenza kwezikhangiso ezenziwa kumawebhusayithi ethu. Babheka imininingwane efana nenani lezivakashi ezihlukile, inani lezikhathi izikhangiso ezithile zikhonjisiwe, kanye nenombolo yokuchofozwa izikhangiso ezitholile. Zisetshenziselwa futhi ukwakha amaphrofayli abasebenzisi, okubandakanya ukukubonisa izikhangiso ezisuselwa kwimikhiqizo oyibukile noma ngezenzo ozithathile kumawebhusayithi ethu (namanye). Lezi zibekwe Kerry Blue Terrier Foundation namanethiwekhi wesithathu othembekile, futhi ngokuvamile aphikelela emvelweni.
Okwesithathu / Okuqukethwe Okushumekiwe Amasayithi aphethwe ku- kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info asebenzisa izinhlelo zokusebenza ezahlukile zensizakalo nezinsizakalo ukuthuthukisa ulwazi lwabavakashi bewebhusayithi. Lokhu kufaka amapulatifomu ezokuxhumana nabantu njenge-Facebook ne-Twitter (ngokusebenzisa izinkinobho zokwabelana), noma okuqukethwe okushumekiwe okuvela kwi-YouTube naseVimeo. Ngenxa yalokhu, amakhukhi angahle asethelwe yilawa maqembu wesithathu, futhi awasebenzise ukulandela umsebenzi wakho online. Asinakulawula okuqondile imininingwane eqoqwe yilawa makhukhi.
Izivakashi zingafisa ukukhawulela ukusetshenziswa kwamakhukhi noma zivimbele ngokuphelele ukuthi zisethelwe. Iziphequluli eziningi zihlinzeka ngezindlela zokulawula ukusebenza kukhukhi njengobude besikhathi abagcinwa ngaso - kungaba ngokusebenza okwakhelwe ngaphakathi noma ngokusebenzisa ama-plugins weqembu lesithathu. Uma ukhubaza amakhukhi, sicela wazi ukuthi ezinye izici zensiza yethu kungenzeka zingasebenzi kahle.
Ukwazi kabanzi ngokuphatha nokususa amakhukhi, vakashela nge-cookies.org. Ngemininingwane eminingi ngezinqumo zakho eziphathelene nokusetshenziswa komsebenzi wakho wokuphequlula iwebhu kumikhangiso osuselwa kuntshisekelo ungavakashela amasayithi alandelayo:
Kwidivayisi yeselula, futhi ungalungisa izilungiselelo zakho ukuze unciphise ukulandelwa kwezikhangiso.
Ungaphuma kuGoogle Analytics ngokufaka Isengezo sokuphuma kwesiphequluli sikaGoogle.
Ukuze uqonde kangcono ukuthi izinsizakalo zethu zisetshenziswa kanjani, sibheka imisebenzi ethile yomsebenzisi eyenzeka ngaphakathi kwemikhiqizo yethu, kufaka phakathi ukubukwa kwamakhasi nokuchofoza kunoma yikuphi ukuxhumana okusetshenziswa lapho kulawulwa isiza ngamadeshibhodi ethu.
Sibiza ngamunye walezi zenzo ngokuthi “umcimbi.” Imicimbi ye-Analytics inamathele kwi-akhawunti yakho kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info akhawunti futhi iphathwa ngohlelo lweqembu lokuqala oluthi Kerry Blue Terrier Foundation ungumnikazi futhi uyanakekela. Ngokuvamile, siqopha imininingwane elandelayo yomcimbi ngamunye: ikheli le-IP, kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info ID yomsebenzisi negama lomsebenzisi, kerryblues.info, forum.kerryblues.info, chat.kerryblues.info Ubunikazi besayithi obuxhunyiwe, umenzeli womsebenzisi, i-URL ekhomba, isikhathi sesikhathi somcimbi, ulimi lwesiphequluli, nekhodi yezwe.
Sisebenzisa lolu lwazi ukuthuthukisa imikhiqizo yethu, senze ukumaketha kuwe kube okufanele kakhulu, ngezifiso isipiliyoni sakho, nokwenza ezinye izinjongo ezichazwe kunqubomgomo yethu Yobumfihlo.
Ungaphuma ohlelweni lwethu lwe-analytics ngokusebenzisa izilungiselelo zakho zomsebenzisi. Ngokwenza kanjalo, ngeke wabelane ngolwazi ngethuluzi lethu lama-analytics mayelana nemicimbi noma izenzo ezenzeka ngemuva kokuphuma, ngenkathi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho yeWordPress.com. Qaphela ukuthi ukuphuma ngeke kukhubaze ukusebenza kwezenzo esizilandelelayo - ngokwesibonelo, uma ushicilela okuthunyelwe, sisazoqhubeka nokuqopha lokho (ungakhathazeki!), Kepha ngomcimbi noma isenzo ngemuva kokuphuma, ngeke sibe neminye imininingwane ehlobene nalesosenzo noma umcimbi kuthuluzi lokuhlaziya.
Uma unemibuzo mayelana nokusebenzisa kwethu amakhukhi, xhumana nathi ku [Email protected]